ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သွေးလှူလို့ရလား..................... - Page 24 of 40 - Hello Sayarwon
သွေးလှူတာက မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ သွေးလှူတာက သူတစ်ပါးရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကတော့ သွေးလှူဖို့ သင့်တော်ပါ့မလား။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးကိုရော ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ မေမေတို့ဆိုရင်ရော သွေးလှူလို့ ရပါ့မလား ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မလှူတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ မိခင်က ကျန်းမာပြီး အင်အားပြည့်ဝနေမှ မိခင်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားနဲ့ အာဟာရဖြည့်တင်းမှုအပေါ်မှာ မှီခိုနေရတဲ့ ဘေဘီလေးက ကျန်းမာမှာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ သွေးအားနည်းရောဂါကို ခံစားရတတ်ကြပါတယ်။ သံဓာတ်အားနည်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးနီဥဆဲလ် အရေအတွက်နည်းပြီး သွေးအားနည်းရောဂါကို ခံစားရတာပါ။ ဒါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လေဒီတိုင်းလိုလို ခံစားရပါတယ်။
လေဒီ​တွေက အမျိုးသားတွေထက် သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေက ပိုများပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမျိုးသမီး သဘာဝ လစဉ် ဓမ္မတာလာတဲ့ကိစ္စ ရှိနေလို့ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာဆိုရင် ဘေဘီလေး ကျန်းမာဖို့အတွက်ပါဆိုတော့ အာဟာရလိုအပ်ချက် ပိုမြင့်မှာက ပြောနေစရာမလိုအောင်ပါ။ ဘေဘီလေး ကျန်းမာဖို့နဲ့ ပြည့်ဝလုံလောက်တဲ့ အာဟာရတွေကို ရရှိစေဖို့ မေမေက ကျန်းမာနေမှ ဖြစ်မှာပါ။
ပုံမှန်အတိုင်းတောင် သွေးအားနည်းတာ၊ သံဓာတ်ချို့တဲ့တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန် ၃ လရောက်တဲ့အခါ သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေး သောက်ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရချိန်မှာ သွေးလှူဖို့ဆိုတာ စွန့်စားလွန်းရာ ကျပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် မေမေရော ကလေးကို ပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ ကိုယ်ဝန်ရှိစကနေ မွေးဖွားပြီးချိန်အထိ သွေးလှူတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကလေးမွေးဖွားပြီး အနည်းဆုံး ၆ ပတ်ကြာမှ သွေးလှူသင့်ပါတယ်၊ လို့ အမေရိကန်သွေးဘဏ်က ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိခင်ရော ကလေးပါ လုံလောက်စွာ သွေးစီးဆင်းရရှိစေဖို့ မိခင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အရင်က သွေးပမာဏထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် တိုးလာတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီပမာဏ မိခင်ကျန်းမာပြီး ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေး အကောင်းဆုံး ကြီးထွားစေဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရုံပါ။ ပိုလျှံတဲ့ သဘောမရှိပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ်က ပုံမှန် သွေးလှူနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဘေဘီလေးကို လွယ်ထားရချိန်မှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် သွေးမလှူတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွေးလှူတာက သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သလို မီးဖွားချိန်မှာ သွေးဆင်းများတဲ့အခါ သွေးသွင်းရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသွေးသွင်းတာက မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာမျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ သွေးမလှူပါနဲ့၊ လို့ အကြံပြုပါရစေ။
ဘေဘီလေးကို မွေးဖွားပြီးချိန်မှာ အချင်းသွေးလှူတာ၊ stem cell သိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ သွေးကင်ဆာနဲ့ အခြားသော ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအတွက် အကူအညီပေးလို့ရပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်မှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အနားယူမယ်။ အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝ စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးမွေးဖွားပြီး ၆ လအကြာမှာ သွေးလှူလို့ရမှာပါ။
ဒါကြောင့် မိခင်လောင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွေးလှူတာမျိုး မလုပ်ဖို့ ပြောပါရစေ။
Is it safe to give blood during pregnancy? https://www.babycenter.com/404_is-it-safe-to-give-blood-during-pregnancy_1246904.bc Accessed Date 1 April 2020
Why Some Pregnant Women Are Asked by Doctors to Give Blood? https://parenting.firstcry.com/articles/can-pregnant-women-donate-blood-how-safe-is-it/ Accessed Date 1 April 2020
Can Pregnant Women Give Blood? https://www.thebump.com/a/pregnant-give-blood Accessed Date 1 April 2020